Punntland iyo Ahlusunna oo soo dhaweeyay dhaarintii xildhibaannada , rajana ka muujisay qaranimada Soomaaliyeed. – Radio Daljir
Punntland iyo Ahlusunna oo soo dhaweeyay dhaarintii xildhibaannada , rajana ka muujisay qaranimada Soomaaliyeed.
Agoosto 21, 2012 6:00 b 0
Garowe, Aug 21 – Shiikh Maxamed Maxamuud Yuusuf Aw-libaax oo ah wakiilka Ahlusunna u matalayay saxiixayaasha qariidada nabadda ee (Roudmapka) ayaa markii ugu horaysay soo dhaweeyay dhaarintii shalay ee xildhibaannada Soomaaliyeed.
Aw-libaax ayaa waraysi uu siiyay Radio Daljir waxaa uu ku sheegay inuusan wax damaaci ah kaga jirin xilka madaxtinimada ee Soomaaliya, waxaase uu hadalkiisa raaciyay masuulkaan inay maamulka Ahlusunna ka go’antahay sidii dalka Soomaaliya uu uga bixi-lahaa dhibaada gaamurtay.
?Raggeena saxiixayaashu mab-da?eenu waxaa uu ahaa inuu dalka yeesho isbadel, waxa hadda socdana runtii waa arrimhii aan mudada ka shaqaynayay, runtii ahlusunna malahan aragti siyaasadeed oo ku aadan xildoonnimo, aad ayaan uga hambalyaynayaa dadaallada socda? sidaasina waxaa yiri wakiilka ahlusunna mudane Aw-libaax.
Dhinaca kale, wasiiru-dawlaha maamulka wanaaga madaxtooyada Puntland Maxamed Faarax Ciise ?Gaashaan? ayaa isagoo ku hadlaya magaca dawladda Puntland soo dhaweeyay nidaamka looga baxayo kumeel-gaarnimada ee xilligaan ka socota Moqdisho.
Gaashaan oo lahadlay Radio Daljir ayaa yiri ?Waxaan bilad guddoon-siin lahaa guddiga xulida baarlamaanka, oo dhabtii ka tagay qab-qab-layaal dalka iyo dadkaba dambiyo waawayn ka galay, waxaan oran-karaa runtii rajada hadda way fiicantahay, Puntlandna way soo dhawaynaysaa xildhibaannada cusub, waxaana u rajaynaynaa inay noqdaan kuwo guta waajibaadka horyaala?.
Hadaladaan kasoo yeeraya maamulka Puntland iyo urur-diimeedka Ahlusunna ayaa kusoo aadaya xilli lafilaayo maantay baarlamaanka cusub inay iska dhex-doortaan guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Ciidamada amaanka Bosaso oo tahriibayaal iyo doonidii ay la socdeen howlgal kusoo qabqabtay
Guddoomiyaha guddigii xulidda oo sheegtay in ay ku hawlanyihiin soo dhammaystirka mudanayaasha dhimman.